Tsy Maintsy Kristiana Ve Ianao Vao Ho Jamaikana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Aogositra 2014 7:42 GMT
Nampirongatra kiana tamin'ny fanambaràna nataony tamin'ny fety ho an'ny fahaleovan-tena nokarakarain'ny “Jamaican Canadian Association”, nibabababa ny tsy fahampian'ny resaka ara-pinoana ao amin'ilay firenena nosy, i Damion Crawford, mpikambana ao amin'ny parlemantan'i Jamaika, sady minisi-panjakana misahana ny Minisiteran'ny Fizahantany sy ny Fialamboly.
Araka ireo tatitra avy tamin'ny “Pride“, gazetiboky Afro-Kanadiana/Karibeana, nanambara i Crawford fa “ i Jamaika manary ny fahatahorany an'Andriamanitra no tena manahirana azy indrindra.” Nanohy ihany i Crawford fa “niala nisintaka lavitra loatra an'Andriamanitra ny firenena, ary nitsahatra tsy nahafinaritra an'Andriamanitra intsony.”
Josoa 24:15… fa raha izaho sy ny ankohonako, hanompo ny Tompo izahay. #done_talk #God_alone
I Kei Miller, mpanoratra, dia mahita fa hafahafa hoe manao izany fitakiana lehibe izany i Crawford, amin'ny maha-kristiana an'i Jamaika, sahala amin'ny fomba nanerena ireo mponin'ny nosy tamin'ny fotoanan'ny fanjanahantany. Nanakiana an'i Crawford ihany koa i Miller amin'ny fananany fomba fijery teritery ny dikan'ny atao hoe Jamaikana:
Namaly an'i Miller tao amin'ny pejy Facebook-ny i Crawford, nampitaha an'i Etazonia sy Jamaika. Nampiasa ny famaritana ny atao hoe “tsy Amerikana” avy tao amin'ny diksionary Webster izy, nilazany ny atao hoe “Tsy Jamaikàna” — “tsy niombon-kevitra tamin'ireo soatoavina, ireo fototra ary ireo fomban-drazan'ny Jamaikana”, izay novalian'i Kei Miller ato amin'ity lahatsoratra anaty bilaogy ity, izay nalefany tamin'ny aterineto omaly (19 Aogositra). Nanamafy ihany koa i Crawford fa avy amin'ny kolontsain'ny maro an'isa no ahitàna ny tena toetry ny firenena iray:
Nino i Emma Lewis, bilaogera, fa tsy dia mety loatra ho anà minisitry ny governemanta ny mamaritra hoe iza no tena Jamaika marina, amin'ny alalan'ny finoany na ny tsy fisian'io:
Araka ny famintinan'i Kei Miller tao amin'ny lahatsorany voalohany:
Filazana manjo 2 herinandro izay
Fivavahana 15 Mey 2022
Goiana 10 Mey 2022